ukuqala phi ngovavanyo oluzenzekelayo lwewebhusayithi esele ikho?
Eyona Oomatshini Abazihambelayo Ukuqala ngaphi ngokuZenzekelayo koVavanyo lweWebhusayithi ekhoyo?
Ukuqala ngaphi ngokuZenzekelayo koVavanyo lweWebhusayithi ekhoyo?
Ndisandula ukujoyina inkampani esekwe kwiwebhu njengelungu labo lokuqala le-QA. Iwebhusayithi iphuhlisiwe kule minyaka mihlanu idlulileyo kwaye ngeli xesha, abaphuhlisi kunye namanye amalungu eqela bekwenza uvavanyo.
Akukho QA isemthethweni okanye inkqubo yovavanyo ekhoyo, ke lonke uvavanyo luye lwenziwa ngokukhawuleza.
Ngoku umphathi wam ophethe ukuhanjiswa kwesoftware, ufuna ukuba ndenze ipakethe yokuvavanywa okuzenzekelayo apho iqela linokukwenza nanini na xa liphuhlisa izinto ezintsha.
Umbuzo wam ngulo: ndizakuyiqala ngaphi ngovavanyo oluzenzekelayo ukwakha le phakheji yokuhlengahlengisa iwebhusayithi esele isebenza ngaphezulu kweminyaka emihlanu?
Naziphi na izimvo / iingcebiso ziya kuthakazelelwa kakhulu.
Nje ukuba iwebhusayithi isebenze kwaye ikhonze abathengi abakhoyo kangangeminyaka eliqela, ikwisimo esivuthiweyo. Ngokuvuthwa, ndithetha ukuba akukho (ngethemba) akukho bugs zibonakalayo zibonakalayo kwinkqubo kwaye ukuba ikhona, ziya kuba yimicimbi efihlakeleyo okanye engqamlezileyo engabonwa lula ngumntu wonke.
Oko thina akufuneki do, kukuzama ukubhala emva kwexesha iimvavanyo zawo onke amabali asele ephuhlisiwe kwaye eyinxalenye yenkqubo. Nangona kunjalo, into esiyifunayo siseti yeemeko eziphambili ezisebenzisa inkqubo yokuphela kokuphela ukuqinisekisa ukuba uphuhliso lwexesha elizayo alubeki mngciphekweni ukusebenza okukhoyo ngoku.
Amanyathelo angezantsi zezinye izikhokelo ezinokusetyenziselwa iwebhusayithi esele ikho nesele imiselwe ukuze ufumane iimeko eziphambili kunye nendlela yokwandisa kwezi ukwenza ipakethe yokuhlengahlengisa okusebenzayo.
Ngaba uvavanyo lokuzenzekelayo kufuneka lwenziwe liqela elizimeleyo elizinikeleyo?
Kuqala kufuneka uziqhelanise newebhusayithi kunye neempawu zayo. Qala ngokujonga indawo kwaye ufunde indlela yokuziphatha. Ngelixa usenza njalo, unokwenza imephu yengqondo yesakhiwo sewebhusayithi, ngawaphi amaphepha akhoyo kwaye zeziphi izinto ezikhoyo kwiphepha ngalinye.
Iimephu zengqondo ziyindlela elungileyo yokufumana umfanekiso okwiqondo eliphezulu kunye nokujonga ngokubanzi iwebhusayithi yonke. Sisoloko sibhekisa kwiimephu zengqondo ukuze siqonde indlela amaphepha adityaniswe ngayo.
2. Hlanganisa iimethrikhi
Hlanganisa iindlela zokusebenzisa indawo kwindawo yentengiso kunye / okanye kwiqela le-analytics. Uninzi lwamashishini alungisa 'iithegi zokulandela umkhondo' ezinje ngeGoogle Analytics kwiwebhusayithi yazo ukuze zikwazi ukulandelela ukuba abasebenzisi bayisebenzisa njani le ndawo. Kukho ubutyebi bolwazi malunga nokuziphatha komsebenzisi kunye nokuqhelekileyo iihambo zomsebenzisi enokufunyanwa kwezi nkqubo zokulandela umkhondo.
Isizathu sokuba kufuneka siqokelele olu lwazi ukuze sikwazi ukubeka phambili ukuba zeziphi iimeko zovavanyo ukuzenzekelayo kuqala ukuze sifumane elona xabiso lifutshane ngexesha elifutshane.
3. Iimpawu eziphambili
Qala ngokuzenzekelayo kwimiba yokuphela kokuphela kwesicelo sewebhu. Oku kuyakuba sisiseko 'sepakethe yokutshintsha umsi'. Umzekelo, kwisicelo sewebhu se-e-yorhwebo, imeko yokuphela kokugqibela yile:
Iphepha lasekhaya -> Iziphumo zokukhangela -> Iinkcukacha zeMveliso -> Ukungena kwabaThengi / ukubhalisa -> Iinkcukacha zokuhlawula -> Ukuqinisekiswa komyalelo
Kubalulekile ukuba uqaphele ukuba, ukuqala, kufuneka kuphela ukuba siqinisekise ukuba siyakwazi ukufikelela kumaphepha, ukuqala kwiphepha lasekhaya kunye nokufikelela kwiphepha lokuqinisekisa iodolo. Injongo kukujonga ukuba ukuhamba kokuthenga akuphuli, kunokujonga ukusebenza kwephepha ngalinye ngokweenkcukacha.
Nje ukuba olona lawulo lomsebenzisi olulula nolona luqhelekileyo lugqunywe, sinokujonga ngokwahluka ngakumbi. Ngaphandle kwendibaniselwano yeempawu kunye namaphepha, umntu uya kuqaphela ukuba kukho kuphela i-hambs ezimbalwa zohambo lomsebenzisi ngenkqubo ekufuneka ithathelwe ingqalelo.
Ukuphonononga idatha ye-analytics, uya kufumana i-80% yabasebenzisi abanokuhamba ngeendlela ezifanayo kodwa ngedatha eyahlukileyo. Ke ngoko, ipakethe yethu yokubuyela umsi kufuneka yakhiwe ngokusekwe kwezi meko.
Inqaku malunga nokugubungela, apha andithethi ngokhuselo lovavanyo; kugxilwe inqaku lokugubungela .
Yandisa kwiphakheji yokutshintsha umsi ukwenza ipakethe yokubuyela umva ngakumbi ngokusebenzisa iimephu zengqondo kunye nokusebenzisa ubuchule bovavanyo lotshintsho kurhulumente ukwakha imeko.
Amanqaku okungena -Ukuqala, kufuneka kuqala sifumane amanqaku okungena kwinkqubo. Ezi ndawo zokungena zinokuba kukufika komsebenzisi kwiphepha lasekhaya, iphepha leenkcukacha zemveliso, okanye a I-SEM (Intengiso yeeNjini zoPhando) iphepha elithile.
Nje ukuba sichonge iphepha elithile lokufika, kufuneka sibone ukuba zeziphi izinto ezikhoyo kwiphepha elinokusebenzisana nomsebenzisi. Kulapho iimephu zengqondo zibe luncedo kakhulu. Sinokujonga kwinqanaba eliphezulu kwiphepha kunye neempawu zalo.
Apha, intsingiselo yenqaku nokuba yeyinto enye enje ngokukhetha ibhokisi yokuhla okanye ukugcwalisa ifom yeenkcukacha zomsebenzisi okanye njengokucofa ikhonkco.
Urhulumente wasekuqaleni -Ukuba siqala ukufika kwindawo yokungena kwisicelo, kuyakubakho imeko ehambelana nelo phepha. Sirekhoda oko njengemeko yokuqala yesicelo. Nanini na xa sinxibelelana nayo nayiphi na into ekweli phepha, kunokwenzeka ukuba siyitshintshe imeko yayo yokuqala.
Qalisa -Izinto ezithile, xa zinxibelelana nazo, ziya kulayisha iphepha elinye (o.k.t. ukhetho olunokugcina iphepha elinye, kodwa idatha iya kuhlelwa) okanye utshintshele kwelinye iphepha (umz.Ukungenisa iziqinisekiso zomsebenzisi ezifanelekileyo). Into ebangela olu tshintsho, nokuba kukwiphepha elinye okanye kwelinye iphepha, ibizwa ngokuba yi-trigger, njengeqhosha lokungenisa.
Ukuqinisekisa Ke kukho amabango. Nanini na xa imeko yesicelo itshintshiwe, ngokusebenzisana nenqaku, kufuneka senze amabango okujonga imeko yelizwe elitsha. Umzekelo, xa sifaka ifom yokungena kunye nedatha yomsebenzisi esebenzayo, kufuneka sitsho ukuba umsebenzisi ngoku ungene.
Singaqhubeka ngendlela efanayo kutshintsho olutsha, okanye sibuyele kwisimo sokuqala kwaye sinxibelelane nelinye inqaku de sigubungele zonke izinto ezibalulekileyo kwiimephu zengqondo.
Ixesha elingaphezulu, inqanaba lokuzithemba ekusebenziseni ikhowudi entsha liyonyuka njengoko iimeko ezizenzekelayo zizenzekelayo kwaye ziqhutywa rhoqo.
indlela yeengcambu sm-n900t
ukuthembeka kolwazi kuthetha ukuba ulwazi:
Indawo entsha yeDell Indawo 8 Pro ene Windows 10 ngoku iyafumaneka ukuze ithengwe eMelika
Imibala emibini ye-Apple AirPods Max iyathengiswa ngexabiso eliphantsi kunakuqala
Ezonaapps zomculo zilungileyo kwi-iPhone kunye ne-iPad
Uvavanyo lweSony Xperia 10 III
Konke ukudityaniswa kweT-Mobile Sprint: utshintsho lwamaxabiso esicwangciso, ukugquma kwe5G, iivenkile kunye nokubhatalwa kwangaphambili